मन्त्री बिना मगर यस्तो धन्दामा ! अनि के कसरी आउछ मेलम्चीको पानी ?::Nepal Online News Portal
मन्त्री बिना मगर यस्तो धन्दामा ! अनि के कसरी आउछ मेलम्चीको पानी ?
काठमाडाैं ः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको आठ महिना भयो । करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा भए संघीय राजधानीका लाखौं बासिन्दा पिउने पानीको दैनिक समस्याबाट मुक्त हुने थिए । तर उपत्यकावासीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउने जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी मन्त्री बिना मगरको प्राथमिकता भने मेलम्चीमा भन्दा अन्तै बढी भएजस्तो देखिएको छ ।
गत वैशाखमा मन्त्रालयले १४ वटा हिमशृंखलाका २८ हिमनदीको पानी बल्क र बोटल वाटरका रूपमा बेच्न सकिने जनाएको थियो । मुलुकभर उपलब्ध स्रोतको पानी १५ प्रतिशत मात्रै नेपालका लागि आवश्यक पर्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत खेर गइरहेको तथ्यांक पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
हिमनदीको पानी बेच्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टेन्डर आहवान गरिने मन्त्री मगरले बताएकी थिइन् । यसबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर उनले मन्त्रालयमा छलफलसमेत गराइएकी थिइन् ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित स्प्रिरिङ वाटर सार्वजनिक कार्यक्रममा रुद्रगंगा नेचुरल वाटर कम्पनीका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले दुई वर्षदेखि रसुवामा पानीबारे अध्ययन गरेको बताए । अब उक्त पानी विदेशमा निर्यात गर्ने उनले जनाए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, हास्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य उपस्थित थिए । कम्पनीले कलाकारद्वय श्रेष्ठ र आचार्यलाई ब्रान्ड एम्बेस्डरसमेत घोषणा गरेको छ ।कान्तिपुर बाट